dayniile » UN-ka oo u Diiday shaqaalihiisa Inay Ka Cunteeyaan Maqaayad Soomaali leedahey oo Ku dhex Taal Xalane
UN-ka oo u Diiday shaqaalihiisa Inay Ka Cunteeyaan Maqaayad Soomaali leedahey oo Ku dhex Taal Xalane
Qaramada Midoobey ayaa uga digtay shaqaalaheeda in aysan isticmaalin ama ka cunteyn maqaayada The Village ee ku taala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Fariin loo kala diray shaqaalaha qaramada Midoobay ee ka Howlgala Garoonka Muqdisho ayaa looga digay illaa amar dambe in aysan maqaayadaas ka cunteyn karin, isla markaana aysan tagi karin xilliyada nasashada iyo fasaxa shaqada ku jiraan.
Xog uruurin dhinaca amniga oo ay sameyeen Guddi Amni ah oo ka tirsan Qaramada Midoobey oo lagu magacaabo SMT ayaa lagu sheegay inay jiraan dul duleelo dhinaca ammaanka, sidaas darteed shaqaalaha loogu digay in ay adeegsadaan maqaayadda The Village.
Sidoo kale Guddiga Amniga ee SMT ayaa qiil uga dhigay in Maqaayadda The Village ay labo jeer oo hore waxyeelo kala duwan ka soo gaartay qaraxyo ka dhacay dhanka Madina Gate, taasna loogu sababeynayo xaalad amni.
Inkastoo qaraxyadii ka dhacay agagaarka Garoonka diyaaradaha ay ahaayeen kuwo ay xataa saameeyeen dhismaha Air Porka iyo goobo kala duwan oo gudaha Xalane ku yaalla, ayaa hadana la ogeyn sababta ka dambeysa in digniintan ay u gaar ahaato Maqaayadan oo ah tan kaliya ee Soomaali leedahay ee ka shaqeysa gudaha Air Porka Magaalada Muqdisho.
Dad badan ayaa arrintan durbaba u fasirtay inay tahay dagaal ganacsi oo lagula jiro maqaayadaas oo ah maqaayada kaliya ee Soomaali ku taal Xalane, iyadoo xerada Xalane ku yaalaan goobo ganacsi sida hotelo iyo maqaayado ay leeyihiin rag ajnabi ah oo qaarkood fasax looga heysan dowladda Soomaaliya.